Windows 10 ho ROM azy manokana ao amin'ny Xiaomi Mi4 | Androidsis
Mikasa ny hitondra ny Windows 10 amin'ny telefaona Android i Microsoft, iray amin'izany Xiaomi Mi4
Microsoft dia mijery Android ho toy ny faritany ahitanao vahaolana sy tombontsoa samihafa araka ny efa hitantsika tamin'ny fampiharana izay natombony tato anatin'ny volana lasa. Ary tsy vitan'ny hoe nahita ny fampidirana ireo fampiharana miavaka isika fa na dia ny fitaovana finday sasany aza toy ny Nokia N1 o ny telefaona farany ambany izay hitantsika tamin'ny taon-dasa na dia nandalo tsy nisy fanaintainana na voninahitra aza ireo.
Vao omaly dia nipoitra fa mikasa ny Microsoft andramo ny Windows 10 amin'ny Xiaomi Mi 4 mahery. Eny, ny mpanamboatra izay eo am-bavan'ny tsirairay dia nanampy an'i Microsoft tamin'ireny fitsapana ireny, na dia nambarany mazava aza fa tsy nahatratra karazana fifanarahana izy. Ireo fitsapana natao ireo dia nampiharihary fa ny kinova Windows 10 ampiasaina amin'ny Mi 4 dia manolo ny kinova Android tonga tampoka amin'ity finday Xiaomi ity toa ny ROM-ny azy ihany.
Windows Phone toy ny hoe ROM hafa
Ny vokatra farany amin'ny fitsapana Windows 10 amin'ny Xiaomi Mi 4 dia ny fananana ny serivisy Microsoft rehetra. Ary tsy ilaina ny taitaitra be satria ity dia safidy tsotra foana ho an'ny ilay mpampiasa Xiaomi Mi 4 izay afaka misafidy ny hametraka ROM misy Windows 10 fa tsy Cyanogen. Na izany aza, ROM iray hafa ho solon'ny flash ary ahafahan'ny mpampiasa mianatra momba ny fiasa Windows 10 ary manandrana kely ny traikefan'ny mpampiasa avelan'ity OS ity.
Microsoft hainy ny milalao ny karany eto Ary satria fantany fa misy mpampiasa Android marobe izay manandrana ROM samihafa hitadiavana izay tadiavin'izy ireo, dia nahita fomba hitsapana ny Windows Phone izy ka handray vitsivitsy am-pelatanany.
Ary tsy eto ihany io, fa tsy ho ela Manantena i Microsoft fa hanana ROM mitovy amin'izany ho an'ny telefaona Android hafa. Ny antony nisafidianan'ny Microsoft an'i Xiaomi ho terminal voalohany hanandramana ny Windows 10 dia noho ny tamberina noraisin'ireo mpampiasa azy manokana.
Hetsika mahaliana nataon'i Microsoft hiditra ao amin'ny Android ary hanolotra ny ROM ho solon'ny tompona Android.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Mikasa ny hitondra ny Windows 10 amin'ny telefaona Android i Microsoft, iray amin'izany Xiaomi Mi4
Toa tamin'ity indray mitoraka ity dia nahavita asa be tamin'ny windows 10 izy ireo, natolotr'izy ireo tamin'ny sehatra rehetra !!
Ary mifanaraka amin'ny haben'ny windows xp tsara izy ireo, fomba fijery ratsy, 7 tsara, 8 ratsy ary 10 tsara
Fangatahana 5 homena amin'ny andron'ny ray